Xasan oo ka hadlay Ciidanka UK
9 Feb 9, 2013 - 9:04:21 AM
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sh. Maxamuud oo ka hadlay ciidamada UK ee Muqdisho tagaya ayaa sheegay inaysan ahayn kuwo ka qaybqaadanaya dagaalka lagula jiro Al-shabaab.
Xukuumada UK ayaa sheegtay inay ciidamo gaar ah u dirayso Somalia si ay tababaro u siiyaan ciidamada DF iyo kuwa AMISOM ee caawinaya, sidoo kale ciidamadan ayay sheegtay inay ilaali doonaan xarunta Safaarada England ay ku yeelanayso Muqdisho.
“Ciidmadan waa kuwo ciidamada DF ka caawinaya dhinaca tababarka iyo qalabka, mana ahan kuwo qayb ka qaadanaya dagaalada lagula jiro Al-shabaab” ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Madaxweynaha Somalia ayaa dhawaan booqasho ku tagay Magaalada London inkastoo aan si sax ah loo shaacin waxyaabaha rasmi ahaan ay uga hadleen isaga iyo Ra’iisul Wasaaraha UK, David Cameron, marka laga reebo in la sheegain ay kawada hadleen adkeynta xiriirka labada dal.
“Dowlada England waxaan ku heshiinay in ciidamada Somalia ay tababarto, markan ciidamadan waxay qayb ka yihiin kuwii aan ku heshiinay inay tababar siiyaan ciidamadeena” ayuu hadalkiisa ku dara.
Britain ayaan faahfaahin dheeraad ah ka bixin howlaha rasmi ahaan aynka qabanayaan ciidamadeeda ay u dirayso Somalia, waxaase sanadkii hore lagu arkay gudaha Somalia, gaar ahaan Degmada Afgooye ciidamo British ah oo caawinaya ciidamada AMISOM ee dagaalka kula jira Ururka Al-shabaab.
Imaanshaha ciidamadan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ciidamada ka socda Midowga Afrika ee AMISOM ay guulo ka gaareen dagaalka ay kula jiraan Xoogaga Al-shabaab oo dhul badan laga qabsaday dhowr iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay. GAROWE ONLINE